जब तीन वटा माहुरी आँसु पिउनकै लागि युवतीको आँखामा पसे ! – Kendrabindu Nepal Online News
जब तीन वटा माहुरी आँसु पिउनकै लागि युवतीको आँखामा पसे !
अन्तराष्ट्रिय, चित्र–बिचित्र, पत्र-पत्रिका बाट, समाचार
ताइवानमा डाक्टरले एक युवतीको आखाबाट तीन वटा जिउदो माहुरी निकालेका छन् । फुयिन मेडिकल युनिभर्सिटीका डाक्टर हङ ची– टिङ का अनुसार यी माहुरी स्वेट–बी को नामले परिचित छन् । यो प्रजातीका माहुरी पसिनाबाट आकर्षित हुने गर्छन् ।
ताइवानकी यी २० वर्षकी युवतीको आँखाबाट विगत केही समयदेखि आँसु आउने गरेको थियो । यसैबाट आकर्षित भएर माहुरी आँसु पिउनका लागि आँखामा प्रवेश गरेका हुन् । युवतीको आँखाबाट जब माहुरी निकालियो, माहुरीले उनको आँखाको पुरै आँसु पिइसकेका थिए ।